Mpamatsy sokajy tsindrona sy orinasa mpanamboatra sokajy tsindrona China
Ny fanjaitra tsindrona hypodermic azo atsofoka dia misy mpanjaitra fanjaitra, fantsom-fanjaitra ary tanany miaro. Ireo fitaovana ampiasaina dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fitsaboana ary voahosotra amin'ny oxygène etilène. Ity vokatra ity dia aseptika ary tsy misy pyrogen. mety amin'ny intradermal, subcutaneite, hozatra, tsindrona lalan-drà, na fitrandrahana fanafody ranoka ampiasaina.
Famaritana modely: Manomboka amin'ny 0.45mm ka hatramin'ny 1.2 mm
Ny fatra tsindrona dia ahitsy amin'ny alàlan'ny kofehy marina, ary ny hadisoana fatra dia tsara kokoa noho ny toharotera mitohy.
◆ tsindrona tsy misy fanaintainana hanamaivanana ny tsindry ara-psikolojikan'ny marary;
◆ Teknolojia fanaparitahana ambanin'ny tany hanatsarana ny tahan'ny fidiran'ny zava-mahadomelina;
◆ tsindrona tsy misy fanjaitra hisorohana ny ratra amin'ny fanjaitra ataon'ny mpiasan'ny fitsaboana;
◆ Arovy ny tontolo iainana ary hamaha ny olan'ny fanodinana fako ara-pahasalamana amin'ny fitaovana fanindronana nentim-paharazana.
Ny syringes mamoaka zava-mahadomelina azo ampiasaina dia vokatra be mpampiasa ao an-trano sy any ivelany. Amin'ny asan'ny klinika, ny mpitsabo dia mila mampiasa syringes lehibe sy fanjaitra fanindronana lehibe handefasana ranon-tsiranoka. Ireo solifara aseptika azo ovaina novokarin'ny orinasa syringes Medical dia be mpampiasa amin'ny klinika, ary manan-danja ny tombony ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ny syringe mamono zava-mahadomelina dia takiana mba tsy misy poizina sy tsy miteraka setroka, noho izany dia novokarina sy nofonosina tamina atrikasa ambaratonga 100.000. Ny vokatra dia misy syringe, fanjaitra fanindronana rongony mamono, ary fonony fiarovana. Ny palitao syringe sy ny tsorakazo fototra dia vita amin'ny polypropylene, ary ny piston dia vita amin'ny fingotra voajanahary. Ity vokatra ity dia mety amin'ny paompy sy fampidirana fanafody ranoka rehefa manaparitaka ny fanafody. Tsy mety amin'ny tsindrona intradermal, subcutaneil ary intramuscular an'ny olombelona.
Ny syringe insuline dia mizara amin'ny fahaizan'ny nominal amin'ny alàlan'ny fahaiza-manao anarana: 0,5mL, 1mL. Ny fanjaitra amin'ny tsindrona ho an'ny tsindrona insulina dia misy amin'ny 30G, 29G.
Ny syringe insuline dia miorina amin'ny fotokevitra kinetika, amin'ny alàlan'ny fidirana an-tsoratry ny tsorakazo lehibe sy ny tanany ivelany (miaraka amin'ny piston), amin'ny suction sy / na hery manosika ateraky ny fihetsika tanana, ho an'ny hetahetan'ny klinika fanafody ranoka sy / na tsindrona ny fanafody ranoka, indrindra Ho an'ny tsindrona klinika (subcutaneur marary, intravenous, tsindrona intramuscular), fisorohana ny fahasalamana sy ny valanaretina, vaksiny, sns.
Ny syringe insuline dia vokatra tsy mitera-tena izay natao hampiasaina tokana fotsiny ary maharitra mandritra ny dimy taona. Ny syringe insuline sy ny marary dia mifandray, ary ny fotoana fampiasana dia ao anatin'ny 60 minitra, izay fifandraisana vetivety.
Ny asa fanimbana tena dia hanomboka avy hatrany aorian'ny tsindrona, hisorohana tsara ny fampiasana faharoa.
Ny famolavolana firafitra manokana dia ahafahan'ny mpampitohy conical handroaka ny fivorian'ny fanjaitra hiditra tanteraka ao anaty tranony, hisorohana tsara ny loza mety hitranga amin'ny tehina fanjaitra ho an'ny mpiasa ara-pitsaboana.
Ny lozisialy Auto-Disable Syringe azo esorina dia ny fanjaitra fampidirana izay hisintona tanteraka ao anaty tranony mba hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny fanjaitra. Ny famolavolana firafitra manokana dia ahafahan'ny mpampitohy conical handroaka ny fivorian'ny fanjaitra hiditra tanteraka ao anaty tranony, hisorohana tsara ny loza mety hitranga amin'ny tehina fanjaitra ho an'ny mpiasan'ny fitsaboana.
1. Kalitaon'ny vokatra miorina, fanaraha-maso famokarana mandeha ho azy feno.
2. Ny takona vita amin'ny fingotra dia vita amin'ny fingotra voajanahary, ary ny tsorakazo lehibe dia vita amin'ny fitaovana fiarovana PP.
3. Ny famaritana feno dia mety mifanaraka amin'ny filan'ny tsindrona klinika rehetra.
4. Omeo fonosana plastika malefaka vita amin'ny plastika, fitaovana mora ampiasaina amin'ny tontolo iainana, mora esorina.